Yintoni isenzo sokuxelwa kwangaphambili eNew York? Yintoni intlawulelo? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Yintoni isenzo sokuxelwa kwangaphambili eNew York? Yintoni Intlawulelo?
Agasti 9, 2016 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Kuthetha ukuthini ukubizwa kweNewclusive eNew York?
Xa uyeka ukubhatala ityala lakho, ibhanki ingafaka ifayile kwisikhalazo ukuze ithengise ikhaya lakho ukwanelisa inothi yezokhuseleko (ukubambisa ngento oyibolekileyo). Nangona kunjalo, iya nzulu kunoko.
Yonke injongo yokuzisa isenzo esibonakalayo kukuphelisa ukulingana kokuhlangulwa kombolekisi kunye nawo onke amanye amaqela. Yinto yomlomo. Inxalenye ebalulekileyo yokuqonda ukulingana kwentlawulelo. Eli lilungelo elinikezwe umbolekisi okanye kuye nakuphina ukubanjwa kwamalungelo okuboleka lowo ubenako ukukhupha imali etyalwa kwimali mboleko yobambiso ukuze kucinywe itayitile (ibango lotywala). Umntu oqeshisa kwipropathi efana nabaqeshi kunye nababambisi abancinci nabo banelungelo lokuhlangula (eli nqanaba lesibini labantu kufuneka libe nomdla ofanele ukukhusela).
Ungayifumana njani indlu yakho ese-New Jersey emva kokuba ithengisiwe eSheriff Auction.
Ke kufuneka ahlawule malini umntu ukuze ahlawulele? Yisixa sonke esikhuselweyo ngubambiso. Oku kubandakanya inqununu, inzala ukuya kufikelela kumhla wokuhlenga, umrhumo wegqwetha, iindleko zenkundla, kunye neenkcitho ezivunyelwe ngumthetho. Ungaqhagamshelana nebhanki okanye igqwetha labo ngqo ukuze ufumane inombolo.
Ityala le-1970 elibizwa ngokuba ngu-Hardyston National Bank v. Tartamella wabamba ukuba lowo ubolekayo angasebenzisa ilungelo lakhe lokuhlawula lonke ixesha le-10 emva kokuthengisa kwangaphambili (ixesha elimiselweyo phantsi komgaqo owahlukileyo ovumela inkcaso ukuba yenziwe kwintengiso ngaphakathi kwe10 iintsuku). Ukuba iqela liyayala inkcaso kwintengiso, ilungelo lentlawulelo longezwa kwaye kude kube ngumhla apho izichaso zisonjululwe yijaji. Ukuba umthengi ukhetha ukuhlangula, umntu obambele ityala kufuneka athengise ixabiso lazo zonke iindleko kunye nemirhumo ngesiphakamiso kuwo onke amaqela (kubandakanya nesherifu). Esi sindululo kufuneka sibekele ecaleni intengiso kwaye simise isherifu ekunikezeleni ithengi leyo kumthengi. Umyalelo kufuneka ubandakanye umyalelo wokukhupha ulwaneliseko lwesigwebo xa ifumene imali.
Ukuba ukuboniswa kusengaphambili, igqwetha lethu lokukhusela intsholongwane liyafumaneka ngomnxeba ukukunika udliwano-ndlebe olukhululekileyo malunga nokuchazwa kweNew York kunye ne-New Jersey Iiofisi zethu zikwiJersey City nakwisiXeko saseNew York.